१ हजारमा किनेको औंठी १० करोड ७५ लाख मा बिक्रि भएपछि… – Khabar PatrikaNp
१ हजारमा किनेको औंठी १० करोड ७५ लाख मा बिक्रि भएपछि…
September 25, 2020 223
काठमाडौ । कहिले काहिँ मानिसलाई नसोचेको फाइदा पुग्छ । समान्य देखिएका चिजबस्तु पनि कहिलेकाहिँ निकै महत्वपूर्ण बन्न जान्छ । यस्तै भएको छ, बेलायतको लण्डनमा बसोबास गर्ने डेब्रा गोडार्डलाई । उनी अस्वभाविक रुपमा करोडपति भएकी छिन् ।
द सनमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोडार्डसँग विगत ३० वर्षदेखि एउटा सुनको औंठी थियो । जसमा एउटा चम्किलो पत्थर जडान गरिएको थियो । उक्त औंठी गोडार्डकी आमाले सेलमा १० पाउन्ड९१ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ० मा किनेकी थिइन् ।
Prevकाठमाण्डौमा फेरि फालियो झाडीमा बच्चा” जीवितै फेला परेपछि बाबु मिडियामा; (भिडियो हेर्नुस्)
Nextदशैंमा घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना…!!!
अमेरिका राष्ट्रपतीय निर्वाचन : ट्रम्पको प्रस्तुति राम्रो नभएको र फितलो भएको,वाइडेनको प्रस्तुति भद्र र सकारात्मक
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,भोलि कार्तिक १५ गते शनिबार, को राशिफल पढ्नुहोस